Incredibles2(2018) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
PG 2018 118 min Animation
Bob Odenkirk, Brad Bird, Catherine Keener, Craig T. Nelson, Eli Fucile, Holly Hunter, Huck Milner, Nicholas Bird, Samuel L. Jackson, Sarah Vowell
Incredible 1 ကွညျ့ဖူးတဲ့သူဆိုရငျတော့ Incredible 2ကိုကွိုကျမယျဆိုတာအသအေခြာပါ ဒီဇာတျလမျးမှာတော့ Mr Incredibleတို့လို စူပါဟီးရိုးတှဟော တရားဝငျတဲ့စူပါဟီးရိုးတှဖွေဈမလာသေးပါဘူး ဒီဇာတျလမျးအစမှာ တော့Mr Incredible တို့မိသားစုဟာ Underminer ဆိုတဲလူဆိုးကို လိုကျဖမျးစီးဖို့ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့လဲ မဖမျးမိဘဲ မွိုထဲကို အထိအခိုကျအဆုံးအရှုံးတှတောဖွဈလာစပေါတယျ ကောငျးကြိုးထကျဆိုးကြိုးတှကေိုဘဲမွငျတဲ့ ပွညျသူနဲ့ရဲတှရေဲ့ တှနျးအားပေးမှုတှကွေောငျ့ Mr Rick Dicker က Mr Incredible တို့ကို့တာဝနျမှရပျစဲလိုကျပါတယျ အဲ့နောကျမှာတော့Mr Incredible တို့မိသားစုဟာအလုပျလကျမဲ့ဖွဈသှားတဲ့အခြိနျ မမြှျောလငျ့ဘဲ သူဌေးတဈယောကျရဲ့ အလုပျကမျးလှမျးခွငျးကိုခံခဲ့ရဲပွီး Mrs Elastigirl ဟာထိုသူဌေးရဲ့ နညျးပညာအကူအညီတှနေဲ့ပေါငျးစပျပွီး စူပါဟီးရိုးတှကေို တရားဝငျနာမညျပွနျရလာဖို့ ဘယျလိုကွိုးစားခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့ ဟာသလေးတှပေါနှောပွီး စိတျလှုပျရှားစှာနဲ့ ကွညျ့ရှုမှာဖွဈပါတယျဗြာ
Incredible 1 ကြည့်ဖူးတဲ့သူဆိုရင်တော့ Incredible 2ကိုကြိုက်မယ်ဆိုတာအသေအချာပါ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ Mr Incredibleတို့လို စူပါဟီးရိုးတွေဟာ တရားဝင်တဲ့စူပါဟီးရိုးတွေဖြစ်မလာသေးပါဘူး ဒီဇာတ်လမ်းအစမှာ တော့Mr Incredible တို့မိသားစုဟာ Underminer ဆိုတဲလူဆိုးကို လိုက်ဖမ်းစီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လဲ မဖမ်းမိဘဲ မြိုထဲကို အထိအခိုက်အဆုံးအရှုံးတွေတာဖြစ်လာစေပါတယ် ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးတွေကိုဘဲမြင်တဲ့ ပြည်သူနဲ့ရဲတွေရဲ့ တွန်းအားပေးမှုတွေကြောင့် Mr Rick Dicker က Mr Incredible တို့ကို့တာဝန်မှရပ်စဲလိုက်ပါတယ် အဲ့နောက်မှာတော့Mr Incredible တို့မိသားစုဟာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန် မမျှော်လင့်ဘဲ သူဌေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ်ကမ်းလှမ်းခြင်းကိုခံခဲ့ရဲပြီး Mrs Elastigirl ဟာထိုသူဌေးရဲ့ နည်းပညာအကူအညီတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး စူပါဟီးရိုးတွေကို တရားဝင်နာမည်ပြန်ရလာဖို့ ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့ ဟာသလေးတွေပါနှောပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ ကြည့်ရှုမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
Bob Odenkirk Brad Bird Catherine Keener Craig T. Nelson Eli Fucile Holly Hunter Huck Milner Nicholas Bird Samuel L. Jackson Sarah Vowell
A.J. LoCascio Adam Gates Adam Rodríguez Alyson Stoner Andrew Kishino Barry Bostwick Bill Wise Bob Odenkirk Brad Bird Catherine Keener Cathy Cavadini Craig T. Nelson Dave Fennoy David Cowgill Debi Derryberry Eddie Frierson Eli Fucile Fred Tatasciore Holly Hunter Huck Milner Isabella Rossellini Jackie Gonneau Jean Gilpin Jennifer Crystal Foley Jere Burns Joe Zieja John Ratzenberger Jonathan Banks June Christopher Karen Huie Kimberly Adair Clark LaTanya Richardson Jackson Marcella Lentz-Pope Matthew Wood Max Mittelman Melanie Minichino Michael B. Johnson Michael Bird Nicholas Bird Patricia Lentz Paul Eiding Paul Pape Paula Tiso Phil LaMarr Piotr Michael Rebecca Davis Robert Clotworthy Robin Atkin Downes Samuel L. Jackson Sarah Vowell Scott Menville Scott Whyte Sophia Bush Stephen Apostolina Steve Blum Terri Douglas Usher Wally Wingert Wendy Cutler Yuri Lowenthal
Option 1 storage.msubmovie.com 557 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 557 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 557 MB SD (480p)
Option4yuudrive.me 1.3 GB HD (1080p)
Option7storage.msubmovie.com 3.3 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 8 sharer.pw 3.3 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option9yuudrive.me 3.3 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Son of Batman (2014) 2014
Leap! (2016) 2016
Green Lantern: Emerald Knights (2011) 2011